The cusub "Shot on iPhone" ka go'an dabcan Christmas | IPhone news
The cusub "Shot on iPhone" ka go'an dabcan Christmas
"Saving Simon" waa muuqaalkii ugu dambeeyay ee lagu sii daayay ololaha " Shot on iPhone " Laga soo bilaabo Apple waxaana lagu duubay hab la taaban karo oo leh iPhone 13 Pro cusub. Sida cad muuqaalkan cusub wuxuu u heellan yahay ololaha Christmas-ka.
Fiidiyowga cusub waxaa agaasime ka ah Aktarka loo magacaabay Oscar iyo filim sameeye Jason Reitman iyo aabihiis, filim sameeye uu Oscar u magacaabay Ivan Reitman. Si kastaba ha noqotee, fiidiyowgu runtii waa shucuur, sida kiiskan u heellan ololaha kirismaska, oo qiiro leh oo leh taabasho Apple ah.
Halkan waxaan ku wadaagnaa cusub "Shot on iPhone" kaas oo sida muuqata lagu duubay gabi ahaanba iPhone 13 Pro laakiin markii dambe lagu tafatiray software si loo bixiyo natiijada kama dambaysta ah sida tan aan ku aragno fiidiyowga:
Waxaa hubaal ah inay mudan tahay in la arko dhammaadka ay leedahay. In ka yar saddex daqiiqo oo fiidyowgu socdaa waxa ay tusinaysaa sheeko nin baraf ah. Sidoo kale sida had iyo jeer xaaladahan waxaan haysanaa ikhtiyaarka ah inaan aragno "muqaalka gadaashiisa" hadaba waxaan kaga tageynaa muuqaalka hoos sadarradan:
Kaliya waa inaad fadhiisataa si aad ugu raaxaysato labada fiidiyow oo aad ogaato kartida kamaradaha iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waa wax lagu farxo in la arko sida noocyada gaaban ama xayeysiiska loo duubay. maadaama xaqiiqda ay yihiin sida filimada oo kale waxaan aragnaa xiisaha duubista iyo kuwa kale. Ma jiraan wax ka haray oo aan ahayn inaad ku raaxaysato shaqada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » The cusub "Shot on iPhone" ka go'an dabcan Christmas
Black Friday waxay soo bandhigtaa alaabada Apple maanta 25ka Noofambar
Black Friday: add-ons ee iPhone kaaga